पत्रकारहरु नेतृत्व छान्दै, नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचन आज – Everest Times News
पत्रकारहरु नेतृत्व छान्दै, नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचन आज
२०७७ चैत्र २५, बुधबार ०९:२२
काठमाडौं । नेपाली पत्रकारहरुका लागि बहुप्रतिक्षीत नेपाल पत्रकार महासङ्घका सबै शाखा, प्रदेश समिति र केन्द्रीय समितिको निर्वाचन आज एकसाथ हुँदैछ । पत्रकार महासङ्घ प्रत्यक्ष मतदान प्रणालीमा प्रवेश गरेपछि केन्द्रीय समितिको निर्वाचन पहिलो पटक प्रत्यक्ष प्रणालीबाट हुन लागेको हो ।
महासङ्घको केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति, जिल्ला शाखा र विभिन्न प्रतिष्ठान तथा एसोसिएटमा नयाँ नेतृत्वका लागि १३ हजार १२२ सदस्यले एकसाथ मतदान गर्दैछन् । बिहान ९ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म मतदानको व्यवस्था गरिएको छ । मतदान सम्पन्न भएपश्चात बुधबार नै मतगणना शुरु गरिने छ । कुनै बाधा नभए चैत २६ गते सबै तहको मतपरिणाम आउने महासङ्घको केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक वरिष्ठ पत्रकार कपिल काफ्लेले जानकारी दिए ।
निर्वाचनका लागि ७७ जिल्लाको सम्बन्धित जिल्ला शाखामा, ४२ प्रतिष्ठानको विभिन्न १९ स्थानमा र एक एसोसियटको दशरथ रङ्गशालामा गरी कुल ९७ बुथमा निर्वाचन तोकिएको छ । केही शाखा र प्रतिष्ठानमा सर्वसम्मत रूपमा नयाँ नेतृत्व चयन भए पनि आज चैत २५ गते मात्रै निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गरिनेछ । यस निर्वाचनमा तीन हजारभन्दा बढी पदाधिकारी तथा सदस्य निर्वाचित हुने र त्यसमा महिलाको उपस्थिति ३३ प्रतिशतभन्दा बढी रहने संयोजक काफ्लेले बताएका छन् । महासङ्घका सबै संरचनामा पूर्ण समावेशिताको व्यवस्था गरिएको छ ।
केन्द्रीय समितिको ४९ पदका लागि १५२ को उम्मेदवारी परेको छ । केन्द्रीय समितिको अध्यक्षमा विपुल पोखरेल र निर्मला शर्माले प्यानलसहित उम्मेदवारी दिएका छन् भने गजेन्द्रसिंह बुढाथोकी पनि अध्यक्षको प्रत्याशी छन् । प्रत्येक तीन वर्षमा सबै समिति तथा शाखाहरुको निर्वाचन हुने महासङ्घमा हाल सबै समितिका नेतृत्व चयनका लागि सबै सदस्यहरुको प्रत्यक्ष मतदानको व्यवस्था गरिएको छ । महासङ्घमा हालसम्म कुनै पनि अध्यक्षको कार्यकाल दोहोरिएको छैन ।
महासङ्घले आफ्नो सङ्गठनलाई सङ्घीयता अनुरूप ढाल्दै प्रदेश समिति तथा प्रदेश परिषद्हरु पनि गठन गरिसकेको छ । देशका सात प्रदेशसहित काठमाडौँ उपत्यकालाई छुट्टै एकाइ मानी आठ भौगोलिक प्रदेश र प्रतिष्ठान शाखा तथा एसोसिएट संस्थाहरु रहने प्रतिष्ठान एवं एसोसिएट दुई गैरभौगोलिक प्रदेश गरी महासङ्घका १० प्रदेश समिति र परिषद् छन् ।
महासङ्घका जिल्ला शाखा ७७, प्रतिष्ठान शाखा ४२, एसोसिएट सदस्य ११, वैदेशिक शाखा नौ, प्रदेश परिषद् १०, प्रदेश समिति १०, केन्द्रीय परिषद् र केन्द्रीय समिति रहेका छन् । महासङ्घको केन्द्रीय समिति ४९ सदस्यीय रहेको छ भने प्रदेश समिति २१ सदस्यीय रहने विधानको प्रावधान छ । जिल्ला तथा प्रतिष्ठान शाखा भने सदस्य सङ्ख्याअनुसार रहने व्यवस्था छ ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ सम्पूर्ण नेपाली पत्रकारहरुको साझा छाता सङ्गठन हो । देश विदेशमा रहेका नेपाली पत्रकारहरुलाई सङ्गठित गर्दै व्यावसायिक नेतृत्व प्रदान गर्ने र श्रमजीवी पत्रकारहरुको हकहित रक्षा गर्दै सम्पूर्ण सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि काम गर्नु महासङ्घको मूल ध्येय, लक्ष्य र दायित्व हो । विसं २०१२ चैत १६ गते गठन भएको नेपाल पत्रकार सङ्घको निरन्तरताका रूपमा महासङ्घ रहेको छ । विसं २०५३ जेठ २९ मा सङ्घलाई महासङ्घमा रूपान्तरण गरिएको हो ।
कामी रिताले चुमे २५ औं पटक सगरमाथाको चुचुरा
अमेरिकी अधिकारीहरुलाई नेपालमा सहयोगका लागि पत्राचार
युरोपका नेपालीले ५० लाखको ‘कोभिड च्यालेञ्ज फन्ड’ बनाउने
नेपालमा थप नौ हजारमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण
पूर्व गोर्खा सैनिक गुरुङ बेलायतमा मेयर निर्वाचित
जुलाई ४ सम्म ७० प्रतिशत बयस्कलाई कोरोना खोप लगाउने वाइडेनको लक्ष्य
माओवादीद्वारा समर्थन फिर्ता, ओली सरकार अल्पमतमा
नेपालको ५२ जिल्लामा निषेधाज्ञा
नेपालमा बुधवार एकै दिन ५८ को मृत्यु, ८६५९ संक्रमित
नेपालमा कोरोनाबाट हालसम्मकै धेरैको मृत्यु
काठमाडौंमा लम्बियो थप एक साता निषेधाज्ञा, थप कडाइ
1 एनआरएनए एनसीसी अमेरिकाको महिला संयोजकमा सुन्दरी गुरुङको उम्मेदवारी
2 अमेरिका प्रवेश गर्न पाउने आप्रबासी शरणार्थी सङ्ख्यामा चार गुणा वृद्धि
3 डा. हर्क गुरुङ स्मृति खुल्ला भलिबल कप न्यूयोर्कमा हुदै
4 नेपालमा कोरोनाबाट हालसम्मकै धेरैको मृत्यु
5 मुखको क्यान्सर र यसबाट बच्ने उपायहरु
6 अमेरिकामा नेपाल डे परेड गर्ने बारेमा किन हुदैछ विवाद ?
7 आन्तरिक र बाह्य सबै उडान बन्द गर्ने सरकारको निर्णय
8 बुद्धहरु नेपालमै जन्मेका हुन्ः नेपाल बुद्धहरुको पवित्र भूमि हो
10 राष्ट्रपति वाइडेनद्वारा भारतसँग यात्रा प्रतिबन्ध